IMacPaw ivula iMic Museum entsha eKiev, eUkraine | Ndisuka mac
Ukuba ungumlandeli weApple kunye neemveliso zayo, kwaye ubucinga ngokuthatha uhambo ngexesha leholide elandelayo, iUkraine mhlawumbi lukhetho olufanelekileyo, ngakumbi ngakumbi ikomkhulu layo iKiev. Kwaye ayisiyiyo kuphela into yokuba unokonwabela inkcubeko kunye nobuhle beli lizwe lihle phakathi kwenkcubeko yaseYurophu kunye nenkcubeko yaseRussia, kodwa nangenxa yokuba kukho iiofisi zeMacPaw, inkampani ephuhlisa usetyenziso oludumileyo lweMac, esandula ukwazisa ivule entsha IMic Museum ivulelekile kuye nakubani na ofuna ukuyindwendwela.
Ukuvulwa ngokusesikweni kweMic Museum entsha eKiev (eUkraine) kwenzeke izolo, ngoLwesine, umhla we-XNUMX kuCanzibe emini; Eyona njongo yayo iphambili asikokuqokelela izinto ezingafunekiyo zeediliya, kodwa "kukukhuthaza amagcisa nabantwana" ngokuqokelela "izinto ezingcwele" olo luhambo ngembali yeMac neApple.
1 Imyuziyam yaseMac yokukhuthaza
1.1 Le yimbali ye-Mac Museum
Imyuziyam yaseMac yokukhuthaza
Mhlawumbi uninzi lwenu aluvakali ngathi liqheleke kakhulu negama iMacPaw, nangona kunjalo, ukuba ndithe "Ndicoce iMac yam", "iGemini" okanye "Setapp", izinto ziyatshintsha. Ewe, iMacPaw yinkampani yemvelaphi yaseUkraine enikezelwe kuphuhliso lwezicelo zeMacOS njengezaziwa kwaye zisetyenziswa njengale bendiyichazile. Kwaye ngoku linoxanduva Bathathe isigqibo sokutyala inxalenye yeenzuzo zabo ekwaziseni inkcubeko yeMac kubafundi, abaphuhlisi kunye nabani na oyifunayo. Ngesi sizathu, izolo kwiiofisi zeMacPaw eKiev (eUkraine) iMic Museum entsha.
Jonga le vidiyo imfutshane yokwazisa, emva koko ndiza kukuxelela zonke iinkcukacha ezihamba negalari engummangaliso yemifanekiso.
Le yimbali ye-Mac Museum
Nge-Agasti yonyaka ophelileyo yaya kwifandesi ingqokelela yezixhobo zeediliya zeApple zikaTekserve. Kwabo abangaziyo, iTekserve yayiyivenkile ekhethekileyo yokulungisa izixhobo zeMac ethi, ukusukela nge1987, ibikhonza abemi baseNew York ukusuka kwindawo yayo eManhattan. Phantse kumashumi amathathu eminyaka (i-29 iminyaka) iTekserve yaba luphawu, "ivenkile yase-Apple yoqobo," ke ukuvalwa kwayo kubangele impembelelo enkulu kubathengi nakubasebenzisi.
I-Tekserve igcine i ingqokelela emangalisayo yeekhompyuter zeMac zokuvuna phakathi kwazo bekukho iCube elandelayo, isikhumbuzo seminyaka engama-20 Mac; iMac yoqobo, 1994 iBook, iPowerMac G4, iPowerBook G4 kwialuminium, iBook, i-Powerbook eyi-12-intshi, iMac, iMac G5, iPowerbook G3 kunye IMacintosh 128k isayinwe nguSteve Wozniak ngokwakhe. Njengokuba abo banoxanduva lweMacPaw besitsho, nganye kwezi kunye nezinye izinto kwingqokelela "imele iziganeko ekubunjweni kweMac kuyilo nakwitekhnoloji."
Xa ingqokelela yayithengisiwe ngehlobo elidlulileyo, IMacPaw ifumene ngokufihlakeleyo le ngqokelela kwi-intanethi I-Tekserve's "Iconic Apple Computers Rare" iyonke $ 47.000. Kwimicimbi yeeveki ezimbalwa, ingqokelela yathunyelwa ivela eNew York yaya eKiev ngombono wokudala iMic Museum eofisini yakhe.
Imyuziyam iMacPaw ke yingqokelela ebekwe ezi-ofisini, iyenza yahluke ngokukodwa kumyuziyam oqhelekileyo. Umahluko omkhulu, nokuba ungakanani na, yiyo loo nto Ayivulelekanga kuluntu ngokubanzi nangona kunjaloInkampani iququzelela iminyhadala kwiofisi yayo ukuze iindwendwe kunye nabancedisi bayityelele. Kwakhona, iMacPaw nayo iququzelela "ukhenketho" lwabantwana ukuze "babone ingqokelela yeMac kwaye bakhuthazwe".
Namhlanje, iMyuziyam yaseMacPaw yeMac inenani lilonke Amanqaku angama-70, angama-40 avela kwiifayile ze- Ukuqokelelwa kweMac Ukuqokelela. Eminye ingqokelela ibandakanya izinto ezazisele ziphantsi kweMacPaw ezinje:
Ingqokelela epheleleyo yazo zonke iimodeli ze-iPhone (ukuya kuthi ga ngoku).
Ukuqokelelwa kweepowusta «Cinga ngokwahlukileyo».
Incwadi «Yenzelwe yiApple eCarlifonia».
I-keyboard yokuqala ekubhalwe kuyo ikhowudi ye-CleanMyMac.
U-Oleksandr Kosovan, u-CEO kunye noMsunguli we-MacPaw kunye ne-CEO ye-Setapp, utshilo Inkampani ngekhe iqale okanye ibekho ngaphandle kweApple kunye nenkcubeko yayo ekhuthazayo, yiyo loo nto baqala ukuqokelela izinto zeapile, Njengorhafu wokuncoma uyilo lwe-Apple kunye nemibono. “UApple ubutshintshile ubomi bam ngeendlela ezininzi. Iqhutywa ngumbono kaSteve weemveliso ezilula nezingcono, ndikwazile ukumilisela ezi zimvo kuphuhliso lwemveliso yethu. Andinakuthi enkosi ngokwaneleyo ku-Apple ukuhlawula lo mbulelo mkhulu kwimbali yeemveliso ze-Apple. "
Ingqokelela "ivulekile" ngengqondo yokuba IMacPaw yamkela iminikelo yeekhompyuter yeediliya kunye nezixhobo kubo bonke abo basebenzisi abafuna ukubona imodeli yabo eyahlukileyo ityhilekile.
Kwaye ekubeni uninzi lwethu lungazukukwazi ukuya eKiev ukuya kuyithanda le Museum, ndikushiya negalari ebanzi yemifanekiso endiyinikiweyo ndisuka eMacPaw. Enkosi Julia!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IMacPaw ivula iMic Museum entsha eKiev, eUkraine